Gudoomiye musuq-maasuq ku eedeeyay DF oo shaqada laga joojiyay
MUQDISHO, Soomaaliya - Duqa Muqdisho ayaa shaqa ka joojin ku sameeyay gudoomiyihii degmada Xamarweyne, Cumar Shariif Maye kadib markii uu eedeyn kulul u jeediyay Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre.
Cumar Shariif ayaa ku eedeeyay Xukuumadda hadda jirta inay tahay midii ugu musuq-maasuqa badnayd ee soo marta dalka, isagoo intaasii ku daray in dalka aysan wax dowlad ah ka jirin.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale ku eedeeyay ciidamada Booliska Soomaaliya in aan lagu aamni karin amniga dalka, islamarkaana ay yihiin kuwa qaraxyada soo geliya magaalada Muqdisho.
Eedeymahan ayaa soo dedejiyay shaqa-joojinta gudoomiye Cumar Shariif, waxaana si KMG ah shaqada maamulka degmada loo dhiibay xigeenkiisii dhanka amniga iyo siyaasadda, Axmed Maxamed Iidow.
Tan iyo markii uu Farmaajo u magacaabey xafiiska Ra'iisul Wasaaraha horaantii 2017, Xasan Cali Khayre ayaa fagaarooyinka ka sheegayay inuu la dagaalamayo musuq-maasuqa ragaadiyay dalka 20 sano ee lasoo dhaafay.
Mas'uuliyiim dhowr ah iyo Taliye-yaal ciidan ayaa xabsi ugu jira musuq-maasuq, iyadoo uu Khayre bishii lasoo dhaafay shaqada ka joojiyay Wasiir ku xigeenkii arrimaha dibadda, Mukhtaar Mahad Daa’uud, oo musuq-maasuqa lagu soo eedeeyay.
HOOS KA AKHRI WAREEGTADA:
Cumar Jeeg ayaa xabsiga la dhigay, markii uu Ra'iisul Wasaare Khayre ku eedeeyay musuq-maasuq...
Saraakiil ka tirsan Booliska Soomaaliya oo musuq-maasuq loo xiray
Soomaliya 25.08.2018. 18:24
Baarlamaanka oo soo farageliyay Kiiska Wasiir Mukhtaar
Soomaliya 06.08.2018. 18:39
Guddoomiyaha Xamarweyne oo lagu xiray xarunta CID-da
Soomaliya 06.09.2018. 00:39
Kheyre oo shaqo-joojin ku sameeyay Wasiir katirsan Xukuumadiisa [Sababta]
Soomaliya 17.10.2018. 21:33